Hector Bellerin ayaa lagu soo waramayaa in loo ogolaan doono inuu kaga tago Arsenal heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah xagaagan.
Daafacan ayaa u furan inuu u dhaqaaqo koox cusub, kadib codsi uu u jeediyay madaxda Gunners iyo Mikel Arteta .
Arsenal ayaa doorbideysa inay heshiis rasmi ah la gaarto mid ka mid ah kooxaha xiiseynaya, iyadoo la siinayo inay helaan qiimaha ay ku doonayaan.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport , kooxda Premier League ka dhisan ayaa diyaar u ah inay ka wada hadasho heshiis amaah ah oo ay waajib ku tahay inay iibsadaan.
Nidaamkaas ayaa aragti ahaan ku habboon kooxaha Inter Milan , kuwaasoo doonaya inay ku beddelaan Achraf Hakimi oo ka tagay kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda heysata Serie A aysan dooneynin inay ku qarashgareyso 20 milyan ginni sannadka soo socda ciyaaryahanka reer Spain.